Abavelisi besitishi kunye nabaxhasi - China Channel Factory
Icwecwe leCarbon Steel
Nxiba Plate Steel Resistant
Iplate yeNsimbi eNqabileyo yeNsimbi
Icandelo le-H yintsimbi licandelo elisebenzayo lezoqoqosho elinokwandiswa okungaphezulu kwendawo yokuhambisa indawo kunye nomlinganiso wobunzima ukuya kubunzima. Ibizwa ngokuba icandelo layo liyafana neleta yesiNgesi "H".
Stainless Round Bar / Intonga
Ngokwenkqubo yemveliso, imivalo yentsimbi engenasici inokwahlulahlulwa ibe ziindidi ezintathu: eshushu isongwe, yakhiwa kwaye yabanda ibanjiwe. Ukucaciswa kweentsimbi ezijikeleziweyo ezingenazintsimbi zijikeleze 5.5-250 mm.
Intonga yentsimbi yeCarbon
IBakala: 201,202,304,309,310,310S, 316,316L, 410, 420,430,904L Ubungakanani: Round pipe OD: 3-1219mm, Ubukhulu: 0.1-60mm Square pipe Ububanzi: 7 × 7 -150 × 150mm, Ukutyeba: 0.4 ～ 8.0mm okoxande Ububanzi kumbhobho: 10 × 20 - 110 × 150, Ubukhulu: 0.4 ～ 10mm Ubude rhoqo 6m, ca njengoko isicelo sakho wenze
Kukho iindidi ezimbini ikakhulu: i-engilateral angle angle yentsimbi kunye ne-angle engal iron. Phakathi kwe-engile engalinganiyo yentsimbi, kukho ukungalingani komphetho ongalinganiyo kunye nokungalingani komphetho ongalinganiyo.
Isixhobo sesinyithi sisetyenziselwa ukwenza ukubetha okubandayo, ukufa okushushu, ukusweleka kunye nezinye iintlobo zensimbi. Isona sixhobo siphambili sokwenza izinto kumacandelo amashishini afana nokuvelisa oomatshini, izixhobo zerediyo, iinjini kunye nezixhobo zombane.